SomaliTalk.com » 2014 » January » 10
Home » Archive Maalinta January 10th, 2014
Warqad furan oo ku socota Ra’isal wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed – By Aden A. Colujoog
Dhambaal xambaarsan talo soo jeedin oo si toos ah ugu sacota Ra’isal wasaaraha Soomaaliya, mudane Cabdiweli Sh. Axmed Mudane Ra’isal wasaare, Marka koowaad iga guddoon salaan diiran oo kal iyo laab ah, salaan kaddib, waxaan Ilaah kaaga baryayaa in uu kuu fududeeyo xilka culus ee aad dusha u ridatay, marka labaadna, waxaan kuu sheegayaa in magacaabistaadii Ra’isal wasaare-nimo ay igu...
Qofkii Dareen Naxariis lihi ku jirto ha u Gargaaro Labadaan Gabdhood ee Walaalaha ah.
Ma jirto cid aan ALLE aheyn oo sidii uu doono heli kara ama sameeyn kara aAadamiguna waa mid ka mid ah noolaha la Maamulo.Sacdiyo Macalin Cismaan Macalin Cali oo 13jir ah iyo Naciimo Macalin Cismaan Macalin Cali oo 11jir ah ayaa ku nool xaalad aad u liidata ka dib markii Sanado badan ay la jiifeen Cudur ay ku Dhasheen kaasi oo Daashaday. Waxa ay Qoyskoodu ku nool yihiin Degaan Miyi ah oo lagu magacaabo...
Soomaalidu Meel ay ku Sugan Tahayba Maxaa Silica Baday?.
Somaali baan ahay, waxaan ka sii ahay Islaam, taasina mahadeeda waxaa iska leh Ilaaheey Subxaanuhu wa-tacaalaa ee Jinsiyaddeyda Soomaali ka yeelay, kolleybase waan filayaa in ruuxna Jinsiyadda uu yahay marnaba aysan baab’eyn walow aad maqasho mararka qaarkood hebel oo haysta Jinsiyadda dal fulaan asalkiisi horesae ahaa Somali ama dal kale, waxayna murti hore u tiri “waa loo Dhashaa Waddani’ ee...
Sannad Guuradii 41-aad ee Ururka Dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Gobolka Banaadir oo la Xusey.
Waxaa Hotelka City Palace ee Magaalada Muqdisho lagu qabtey Munaasabad lagu Xusayey Sannad Guurada 41 aad ee Aas-Aaska Ururka Dhaqdhaqaaqa Iskaashatooyina Gobolka Banaadir oo ku began 8-da Janaayo ,waxaana ka qayb galey Masuuliyin ka tirsan Dowladda Federaalka, Xildhibaano, Urarada Bulshada Rayidka, Qaybaha ka duwan ee Iskaashatooyinka Gobolka Banaadir iyo Marti Sharaf kale. Ugu horeyntii halkaa...